Sira sy menaka oliva, manala ny fanaintainan’ny hatoka
Mety misy fotoana, manaintaina ny ao amin’ny hatoka ao. Manelingelina fatratra izany satria ny hatoka mantsy no natao hizaka ny loha.
Manadio ny oron’ny zazakely
Ilàna fahaizana sy teknika ny famafana lelon-jaza. Ireto misy teknika azo hampiharina Mila diovina
Vinaingitra paoma + sakamalaho : Mampitony sinozia
Otrikaretina mipetraka eo anivon’ny « sinus » ao anatin’ny orona no mahatonga ny sinozita, sery, gripa.
Fihetsika tsotra, mampitony ny rarin-tsaina
Noho ny rotoroto isan’andro, ny fitohanan’ny fiara, ny fikarakarana ny ao an-tokantrano,
Ho an’ny mpifoka sigara… “jus” manadio havokavoka
Iaraha-mahalala fa tena sarotra ny miala sigara. Misy singa poizina ho an’ny havokavoka anefa avy amin’ny sigara, izay manimba azy tokoa.
Ahoana no tena tsara hihinanana atody?
Mitondra otrikaina maro ho an’ny vatana ny fihinanana atody, amin’ny tahany antonony.
Ireo sakafo misoroka ny « Alzheimer »
Aretina manaranaka ny « Alzheimer ». Hatreto aloha dia mbola tsy nisy ny fanafody manokana hitsaboana azy io.
Voazavo na « pastèque » voatetika efamira 1 kaopy
Rano 1 kaopy
Solila raviny 7
Tsotra dia tsotra ny atao. Sasana tsara ny akora rehetra dia omanina, esorina ny tahon’ny frezy dia zaraina roa, alaina ranony ny voasarimakirana, voasana dia atao efamira ny voazavo, sasana ny solila. Alefa ao anatin’ny fitotoana avokoa ireo rehetra ireo dia tapohina ny rano. Raha mahazaka mamanala moa dia azonao ampiana vaingana lagilasy izy ity fa vao mainka hampatsiro azy izany.
Anisan’ny mampiavaka ity smoothie ity ny voazavo izay voankazo feno rano sy potasioma. Samy manadio ny loto ao anaty izy no mamotika ny menaka entin’ny sakafo. Torak’izany koa ny voasarimakirana izay mpanadio taova mandaitra tokoa. Ankoatra izay dia manala ny asidra ao anaty rehetra koa ity zava-pisotro ity. Sady manafisaka ny kibo izy noho izany no mety hampihena koa raha ampiarahana amin’ny sakafo voalanjalanja. Sotroy isa-maraina vao mifoha ka tsy mbola misy na inona na inona ny vavony. Raha mahavita aza dia tsara hatao sakafo hariva ihany koa izy.